राष्ट्रकवि माधव घिमिरे,(गीतकार रमण घिमिरे)
(फोटो: रमण घिमिरे)
नेपालको साहित्य, कला तथा सँस्कृतिको क्षेत्रमा चर्चित व्यक्तिहरुसँग खसखस राख्ने क्रममा यस पटक हामीले निम्त्याएका छौ राष्ट्र्कवि माधव घिमिरे । छयान्नब्बे वर्षको उमेरमा पनि वहाँबाट हुने साहित्यिक कृयाकलापबारे हामीलाई चासो लाग्नु र रहनु स्वाभाविक हो । त्यसैले यस बारेमा जानकारी लिएर तपाईसामू प्रस्तुत गर्ने हेतुले खसखस डट कमकालागी गीतकार रमण घिमिरेले हालै कुराकानी गर्नुभएको छ ।
हेक्का रहोस्, राष्ट्र्कविलाई खसखस डट कममा निम्त्याईएको यो दोश्रो पटक हो । पहिलो पटक हामीले सन् २००७ डिसेम्बरमा निम्त्याएका थियौँ । यसरी खसखस डट कममा दोश्रो पटक निम्त्याईने वहाँ पहिलो पाहुना हुनुहुन्छ । सोकोलागी हामी वहाँप्रति आभार व्यक्त गर्दछौँ ।
यस पटक वहांसंग गरिएका कुराकानी:
राष्ट्रकविबाट साहित्यको रचना कसरी हुने गर्दछ?
मानवीय प्रेम नष्ट भए के होला?
'ऋतम्भरा' के हो र यो केकालागी ?
लगायत अन्य विषयमा भएका रोचक कुराकानी प्रस्तुत छ |